Kuongorora kwekukura kweBaggot Maggot - Small to Large Scale
Kuongororwa kwebhizimisi yekudziridza mavhiri asina kunaka
Kuongororwa kweOglessless Maggot Chirongwa - Mukugadzirisa maggot kusina kushandiswa kwekurima, chinhu chokutanga chinokosha chokufungisisa chinopindirana nezvinhu zvakashandiswa zvinoshandiswa. Mukutsvaga kwekurima kweBSF kana kuongorora mombe, ichi ndicho chinhu chakashandiswa chikafu chemarara, fekitari yekushambadzira uye manyowa. Zvimwe zvinhu zvinokosha ndezvekutsvaga kwekurima BSF, kureva
Chinhu chekutanga chekuongorora kushandiswa kweBSSF kusarudza zvinhu zvakagadzirwa. uye izvo zvatinosarudza ndezvokudya zvakasikwa, zvinowanzoitika mashizha emvura haakoshi kukosha kwehupfumi uye anowanzobviswa. Mukuwedzera, panguva ino huripo hunoenderana nekusanganiswa kwemarara.
Nokudaro, kuitira kuwana zvinhu zvakagadzirwa zvekugadzirwa kwezvinhu zvakagadzirwa, zvakakosha kuedza kuronga tsvina yakasikwa. Mubvunzo ndewokuti, varimi vanogona kuzviita ivo pachavo here?
Kuchengetedza zvakasvibiswa zvakasikwa zvinofanira kuitwa zvakarongeka, zvose pamwe nemasangano emunharaunda uye nehurumende yega. Kana danho iri rakaoma kuti ribudirire, varimi vanogona kushanda pamwe chete nemakambani ezvokudya ane zvakawanda zvekudya zvidhaka.
Kazhinji, kuvapo kwemarara avo kwakanyatsoparadzaniswa. Varimi vanofanirwa kuverenga zvinogona kuita zvidhori zvinogadziriswa zvinogona kuchengetwa nguva dzose kuitira kuti bhizimusi rinogona kufamba zvakanaka.
Chinhu chechipiri pakutsvaga kwekurima kweBFF ndeyekubatanidzwa kwevatengi. Iyi makambani ekugadzira magotti ari kushanda nesimba kugovera mamwe mapuroteni mamwe emhando yehove uye yekufudza zvipfuwo pamutengo usingadhuri nekuda kwebioconversion yemarara.
Kana basa rekugadzira rinotungamirirwa nekuisa zvishomanana zvehove yezvokudya muhove kana muzvigadzirwa zvekudyisa zvipfuwo, ichava nemigumisiro yakawanda mune iyi indasitiri.
Nokuti mutengo wehove kudya gore negore wakawedzera. Kunze kweizvozvo, kuvapo kwemagote kunobatsirawo zvakakwana hove nevarimi vemombe. Vanokwanisa kubudisa izvi zvinoshandiswa mapuroteni zvakasununguka saka vanogona kuderedza kudhura kwemari.
Mamwe mapato avo vanozofarira zvakare chibereko kubva muhutano hwehupenyu huri mishonga nemichero varimi, zvichibva pakugoverwa kwehuwandu hwemumanyorera.
Chechitatu chikonzero chekutsvaga kwekurima kweBSF nderudzi rwebhizimisi ruchaitwa. Kune mhando mbiri dzemabhizimisi ekugadzira magotti ave achivandudza.
Rudzi rwekutanga mabhizimisi akazvimirira, ayo ari varimi kana varimi vehove vanogadzira magot kuti vawane zvavanoda
Rudzi rwechipiri nderudzi rwebhizimisi rine plasma core cooperative pattern. Plasma nucleus kubatana muenzaniso ndeye fomu yemabhizimisi inonyatsokodzera pakugadzirwa kwemashoko apo nzvimbo yepamusoro (inonyanya) ichaita seBFF yaiita mucheki.
Nzvimbo ye plasma inobatanidzwa mukugadzira magot (kutendeuka kwezvinhu zvakasvibiswa) zvinogona kuitwa mumarara ekurapa, dzimba, zvichingodaro.
Izvo zvinokonzera magot zvinobva zvadzorerwa nemugumo kuti uwedzere kuchinjwa kuva magot ufa kana pellets yebhizimisi.
Kukura kwegoroti kunoparadzaniswa muzvikamu zvitatu zvebhizimisi, kureva
Mavambo Ekutanga Kugadzira Maggot
Zvishoma Zvishoma Magog Kukura
Pakati Pakati Pekoko Magog Kukura
Kukura kweMaggot Zvikuru
Fungidzira kuongorora maggot mombe sehove uye huku. Iyi maggot mafudzi ekuongorora ndeyekuongorora zviwanikwa zvinowanikwa mumabasa ekurima maggot. Migumisiro yekutsvakurudza uku ndeyechokwadi chekufungisisa usati watanga bhizinesi
Mhando dzeBhizimisi Bhizimusi
Kuzvimiririra mazai eiyo uye magotti ekugadzirwa zvinowanzozotengeswa sehove uye zvokudya zvezvipfuwo, pasina kuedza kwekugadzira mapeti kana maggot shading. Inyanzvi yekombiyuta inonzi inogamuchirwa zvakanaka nemunharaunda kana ikazadzisa zvikamu zvitatu zvinotevera
Biological aspects uye bioreproduction yemhuka zvakanyatsonaka
Nenyanzvi, teknolojia inogona kushandiswa
Zvemariko inogona kupa zvibatsiro
Kuongorora bhizinesi inzira yehutano kuverenga kuongorora kukosha kwemari kana kubhadharwa kunodiwa pakuita bhizinesi, uye kugona kushanda kwebhizimisi. Zvimwe zvekuverenga zvinoda mubhizimusi kuongorora
Kubvuma uye chiyero
Mutengo (r / c chikwata)
Kuputsa-kunyange pfungwa / bep) uye
Kana chikwata cheR / C chikuru kupfuura 1, bhizimisi inogona kuitika, uye pamwe chete.
Izvo zvinoitika zvebhizimisi urwu zvinogona kuongororwa kubva kumitemo yekutsvaga mashomanana sezvinotevera.
Net profit benefit cost (Net B / C)
Payback nguva (PBP)
Kuputsa kunyange kutaura (BEP)
Mari inoshandiswa mukugadzirwa kwemagotti inosanganisira zvivako zveinsectarium, larvarium, mashizha ehuwandu hwekuverenga, mashizha emichina, uye trolleys. Izvo zvinoshandiswa mune zvisingasaruri mari ndeye
Kutakura mari inotakura motokari yemarara,
Mitengo yemichindwe yamafuta, uye
A. Kufungidzirwa kweAkutanga Scale Business Analysis
Mukufungisisa iyi maggot mombe, inofungidzirwa kuti insectarium yakavakwa pane imwe nzvimbo ye2 m2 uye larvarium yakafukidza nzvimbo ye 3 m2
Nhamba yemarara yakashandiswa yakashandiswa 200kg / zuva
Magot yakabudiswa ne10% yemafuta. Ikozvino, kugadzirwa kwe magotti ndiko 20 kg / zuva
Iyo magotti inowanikwa inoshandiswa pakugadzirwa kwepaupa kana zvipembenene zvakanyanya se15%, nepo imwe 85% inotengeswa kushizha remvura
Mutengo wokutengesera we magotti Rp7.000 / kg
Kukosha kwekutengesa kwehuwandu hwemumanyoka kubva kuhutano hwe bioconversion ndiRp1.000 / kg.
Maggot Zvipfuwo Kuongorora - Nhoroondo dzeInvestment Costs neMagot Production Operations
Zvose Nyaya Yokugadzira Mari
Zvose zvinotengeswa zvinotengeswa pakugadzirwa kwemagetsi mune rimwe gore
Zvose Zvipfeko Zvokudhura = Zvigadziriswa Zvinodhura + Zvisiri-Fixed Costs
Mari Yese Inowana Pamwe Gore
Mari inowanikwa gore rimwe nerimwe = Kuwanda kwekugadzira magot (kg) X Kukosha kwekutengesa kwe magot (Rp)
= (20kg / zuva X Rp7.000) X 85% X (mazuva 365 - mavhiki 52) = Rp43.435.000
Kukosha kwemari inowanikwa mubhizimisi rekugadzira kunogona kuverengwa kuburikidza nekushandisa nzira inotevera.
Kubhadhara (RP) = Imari Yese (Rp) - Yese Yakazoita Mari (Rp)
Simba reMedum-Scale Enterprises
Kubva pane dhizimusi rekuongorora dhizimusi pamusoro apa, zvinoita zvebhizimisi rekuita magotti zvinogona kutsanangurwa sezvinotevera:
1. BEP (Break Even Even Point)
Break Even Point (BEP) muUnited
BEP: Bvisa Kunyange Point
P: Mutengo per unit
Break Even Point (BEP) muRupiah
Fixed Costs uye Zvisingaiti Permanent Costs Nge kg
Fixed Cost = Fixed Cost / Production Unit = 120.000 / 6.205 = 19 Kg
Zvisiri-zvakagadziriswa Mari dzinoshandiswa = Zvisingatarisirwi Mari dzinoshandiswa / Kuita Maitiro = 1.850.000 / 6.205 = 298 Kg
Fixed Cost / (Kutengesa Mutengo Per Kg - Fixed Cost Per Kg) = 120.000 / (Rp7.000 - 298Kg) = 18 Kg
Kuputika-kunyange iyo mu kg kune 18kg. Izvi zvinoreva kuti muzviwero izvi hazvibatsiri uye hazvirasi.
Kuputsika-kunyange iyo mu rupiah iRp125.338
2. Kudzoka Kwekutsvaga (ROI)
ROI = (Kubhadhara / Kushanda Kwemagetsi) x100% = RP43.435.000 / 1.920.000 = 2.262,24%.
Izvo zvinoita kuti mabhizimisi ekugadzira zviyero zviongorwe zvinogona kuongororwa nehuwandu hwekuita,
R / C = Mari (Rp) / Yese Yakazoita Mari Yekuita (Rp) = Rp43.435.000 / Rp1.920.000 = 22,62
Iko R / C kukosha kwakawanikwa ndeye 22,62 kana kupfuura 1. Iyi nhamba inoratidza kuti bhizimusi rekuita mabhizinesi bhizinesi rinoita chaizvo kuti riite.
4. Payback Nguva (PBP)
Nguva yekubhadhara nguva yekuverengerwa inotarisirwa kukwanisa kuongorora nguva yekudzoka kwekutsvaga yekushandiswa kwebhiza yebhiza magot production bhizinesi nehuwandu hwotevera:
PBP (mwedzi) = Kubhadhara mari yose (Rp) / Kushandisa Mari (Rp) x 1 gore = (1.100.000 / 41.515.000) x 12 mwedzi = 0,3 mwedzi.
Migumisiro yenyaya iyi inoratidza kuti yose inotengeswa mari yebhizimisi yemabhizimisi ekugadzira ichadzoka mukati memwedzi ye0,3.
B. Kufanirwa kweBusiness Scale Analysis
Mukufungisisa iyi maggot mombe, inofungidzirwa kuti insectarium yakavakwa pane imwe nzvimbo ye100 m2 uye larvarium yakafukidza nzvimbo ye 100 m2
Nhamba yemarara yakashandiswa yakashandiswa 500kg / zuva
Magot yakabudiswa ne10% yemafuta. Ikozvino, kugadzirwa kwe magotti ndiko 50 kg / zuva
= (50kg / zuva X Rp7.000) X 85% X (mazuva 365 - mavhiki 52) = Rp108.587.500
Fixed Cost = Fixed Cost / Production Unit = 32.050.000 / 15.513 = 2.066 Kg
Zvisiri-zvakagadziriswa Mari dzinoshandiswa = Zvisingatarisirwi Mari dzinoshandiswa / Kuita Maitiro = 9.900.000 / 15.513 = 638 Kg
Fixed Cost / (Kutengesa Mutengo Per Kg - Fixed Cost Per Kg) = 32.050.000 / (Rp7.000 - 638 Kg) = 5.038 Kg
Kuputika-kunyange pamakikiti ndeye 5.038 kg. Izvi zvinoreva kuti muzviwero izvi hazvibatsiri uye hazvirasi.
Kuputsika-kunyange iyo mu rupiah iRp35.265.149
ROI = (Kubhadhara / Kushanda Kwemagetsi) x100% = RP108.587.500 / 40.450.000 = 268,45%.
R / C = Mari (Rp) / Yese Yakazoita Mari Yekuita (Rp) = Rp108.587.500 / Rp40.450.000 = 2,68
Iko R / C kukosha kwakawanikwa ndeye 2,68 kana kupfuura 1. Iyi nhamba inoratidza kuti bhizimusi rekuita mabhizinesi bhizinesi rinoita chaizvo kuti riite.
PBP (mwedzi) = Kubhadhara mari yose (Rp) / Kushandisa Mari (Rp) x 1 gore = (17.750.000 / 68.137.500) x 12 mwedzi = 3.1 mwedzi.
Migumisiro yenyaya iyi inoratidza kuti yose inotengeswa mari yebhizimisi yemabhizimisi ekugadzira ichadzoka mukati memwedzi ye3.1.
B. Kuchengetedzwa kweMedum Scale Business Analysis
Mukuongorora kweiyo mhombwa mhuka, inofungidzirwa kuti insectarium yakavakwa pane imwe nzvimbo ye400 m2 uye larvarium yakafukidza nzvimbo ye 400 M2
Kuwanda kwemarara yakashandiswa anoshandiswa 3 tani / zuva
Magot yakabudiswa ne10% yemafuta. Ikozvino, kugadzirwa kwe magotti ndiko 300 kg / zuva
= (300kg / zuva X Rp7.000) X 85% X (mazuva 365 - mavhiki 52) = Rp651.525.000
Fixed Costs = Fixed Costs / Production Staff = 120.300.000 / 93.075 = 1.293Kg
Zvisiri-zvakagadziriswa Mari dzinoshandiswa = Zvisingatarisirwi Mari dzinoshandiswa / Kuita Maitiro = 26.700.000 / 93.075 = 287 Kg
Fixed Cost / (Kutengesa Mutengo Per Kg - Fixed Cost Per Kg) = 120.300.000 / (Rp7.000 - 287Kg) = 17.920 Kg
Kuputika-kunyange iyo mu kg kune 17.290kg. Izvi zvinoreva kuti muzviwero izvi hazvibatsiri uye hazvirasi.
Kuputsika-kunyange iyo mu rupiah iRp125.440.655
ROI = (Inobhadhara / Yese Inotengeswa Mari) x100% = Rp651.525.000.000 / Rp139.500.000 = 467,04%
R / C = Mari (Rp) / Yese Yakazoita Mari Yekuita (Rp) = Rp651.525.000 / Rp139.500.000 = 4,67
Iko R / C kukosha kwakawanikwa ndeye 4,67 kana kupfuura 1. Iyi nhamba inoratidza kuti bhizimusi rekuita mabhizinesi bhizinesi rinoita chaizvo kuti riite.
PBP (mwedzi) = Kubhadhara mari yose (Rp) / Kushandisa Mari (Rp) x 1 gore = (246.500.000 / 512.025.000) x 12 mwedzi = 5,8 mwedzi.
Migumisiro yenyaya iyi inoratidza kuti yose inotengeswa mari yebhizimisi yemabhizimisi ekugadzira ichadzoka mukati memwedzi ye5,8.